အာဆင်နယ်၏ ယူရိုပါလိဂ်ပွဲစဉ်ကို လုံခြုံရေးအရ ကိဗ်သို့ ပြောင်းရွှေ့၊ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်အတ? - Yangon Media Group
အာဆင်နယ်၏ ယူရိုပါလိဂ်ပွဲစဉ်ကို လုံခြုံရေးအရ ကိဗ်သို့ ပြောင်းရွှေ့၊ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်အတ?
အာဆင်နယ်အသင်းသည် ယူရိုပါလိဂ်အဝေးကွင်းပွဲစဉ်အဖြစ် ယူကရိန်းကလပ် ဗော့စကာလာနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမည်ဖြစ်ရာ လုံခြုံရေးအခြေအနေအရ အဆိုပါပွဲကို မူလဗော့စကာလာ၏အိမ်ကွင်းအစား ကိဗ်မြို့ရှိ အိုလံပီစကီးကွင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ယူအီးအက်ဖ်အေက အတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သောတနင်္ဂနွေနေ့က ခရိုင်းမီးယားကမ်းရိုးတန်းတွင် ယူကရိန်းရေတပ် သင်္ဘောသုံးစင်းကို ရုရှားကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး နောက်နှစ်နိုင်ငံကြား နိုင်ငံရေးတင်းမာမှု များဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက် ယူကရိန်း ပါလီမန်ကနိုင်ငံအတွင်း အရေးပေါ် အခြေအနေကြေညာကာ စစ်အုပ်ချုပ် ရေးထုတ်ပြန်ထားခဲ့သည်။
အဆိုပါအခြေအနေကြောင့် အာဆင်နယ်အနေဖြင့် အဆိုပါဗော့စကာလာနှင့် ယူရိုပါလိဂ်ပွဲကို သွားရောက်ကစားရန် မရေမရာဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ယူအီးအက်ဖ် အေကပွဲကိုမူလစီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း ကျင်းပမည်ဟု အတည်ပြုခဲ့ ပြီးနောက် ၂၄ နာရီအကြာတွင် ပွဲကို မူလပိုလ်တာ ဗာမြို့တွင်ကျင်းပရန်ရှိသော်လည်း လုံခြုံ ရေးအခြေအနေအရ မြို့တော်ကိဗ်သို့ ပြောင်းလဲကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ် ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အာဆင်နယ်ပရိသတ်အချို့နှင့် မီဒီယာများမှာ ပိုလ်တာဗာမြို့သို့ရောက်နှင့် ပြီးဖြစ်သလို တည်းခိုနေထိုင်ရန်လည်း စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သည့်အတွက် ပွဲကစား မည့်ရက်နီးကပ်မှ ယခုကဲ့သို့ကွင်းအ ပြောင်းအလဲဖြစ်လာခြင်းမှာ အခက်တွေ့ စရာဖြစ်စေခဲ့သည်။ ယခုပြောင်းလဲကျင်းပမည့် အိုလံပီ စကီကွင်းမှာ ယမန်နှစ်က ရီးရဲလ်နှင့် လီဗာပူးတို့ကစားခဲ့သော ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲကို လက်ခံကျင်းပခဲ့သောကွင်း ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်ပိုမိုဝင်ဆံ့သော်လည်း မူ လကျင်းပမည့်နေရာနှင့် မိုင် ၂ဝဝ ဝေး ကွာခြင်းကလည်း အာဆင်နယ်အတွက် အခက်တွေ့ဖွယ်ရှိသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် အာဆင်နယ် တိုက်စစ်မှူးအူဘာမီယန်က ယခုနှစ်ရာသီတွင် ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ကို ပြန်လည်ရယူသွားမည်ဖြစ်ရာ အဓိကပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာနိုင်သည့် စပါးနှင့်အားပြိုင် ရန်အသင့်ရှိနေကြောင်းဆိုခဲ့သည်။ အာဆင်နယ်သည် လက်ရှိတွင် ပရီးမီးယားလိဂ်၌ ၁၁ပွဲ ဆက်ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ရထားချိန် တွင် ပြီးခဲ့သောသုံးပွဲဆက်တိုက် နိုင်ပွဲရထားသည့် စပါးနှင့်ရင်ဆိုင် ရမည်ဖြစ်ရာ စပါးနှင့်အားပြိုင်ရန်အသင့်ရှိနေကြောင်း အူဘာမီယန်က ပြောဆိုခဲ့သည်။ အူဘာမီယန်က ”ကျွန် တော်တို့နဲ့ စပါးကြားက ပြိုင်ဆိုင်မှုဘယ်လောက် ပြင်းထန်သလဲဆိုတာ ကောင်းကောင်း သိ ထားပါတယ်။ ချန်ပီ ယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရဖို့ က အဓိကဖြစ်ပြီး ဒီအားပြိုင်မှုမှာ စပါး လည်းပါဝင်လာမှာဖြစ်လို့ အသင့်ဖြစ်နေပါတယ်”ဟု ပြောခဲ့သည်။
လေလွင့်ခွေး၊ ကြောင်များကို ပြည်ပပို့မည့် အစီအစဉ်အား ဆာလက် ဆန့်ကျင်
၂ဝ၁၆ -၂ဝ၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် တမူးမြို့ ၌ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှင့် ဝင်ငွေခွန်အများဆုံး ထမ်းဆောင်?
ဖလားသုံးလုံး ရယူရန် ဆာလောင်နေကြောင်း ဘိုင်ယန်မြူးနစ် နည်းပြ ဟေးနက်စ် ပြောဆို
စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသ ထွက်ကုန်ပြပွဲနှင့် ပြည်ပ ပို့ကုန်မြှင့်တင်နိုင်ရေး ဆွေးနွေးပွဲ သုံးရက